Iindlela zokusebenzisa ixesha elingakumbi njengesibini | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 28/09/2021 22:19 | Ubudlelwane
Isiqhelo kunye nesigqi sobomi senza izibini ezininzi zenze impazamo enkulu, zokungachithi ixesha nisenza izinto kunye. Kuyinyani ukuba kubalulekile ukuba nexesha lakho, kodwa kubalulekile ukuba nikwazi ukuchitha ixesha kunye kwaye nibe nokonwaba omnye nomnye.
Ukuba oku akwenzeki, Kuqhelekile ukuba abantu abatshatileyo baqale ukucaphukelana bade bahlukane. Kwinqaku elilandelayo sinika uthotho lweengcebiso zokusebenzisa ixesha lenu njengesibini.
1 Thetha nesibini
2 Akukho nto icwangcisiweyo
3 Ngakumbi ubuchule kunye nengcinga
4 Iinkcukacha zokuziphatha
5 Lungiselela ukuthanda izinto kwesi sibini
Amaxesha amaninzi kubakho ukunqongophala okubonakalayo konxibelelwano phakathi kwesi sibini. Into yokuqala yokwenza kukuhlala ecaleni komnye umntu kwaye nithethe ngokuzolileyo malunga nezinto ezithandwayo kunye neenkxalabo. Esi sisitshixo xa kufikwa kumba wokugcwalisa iingxaki ezinokubakho kunye nokukwazi ukonwabela kunye ixesha elide.
Akukho nto icwangcisiweyo
Akucetyiswa ukucwangcisa izinto kwangaphambili kuba ukuphucula kungcono kakhulu. Ngale ndlela, akukho nto ilunge ngakumbi kunokuya kusela okanye ukuthatha uhambo olungacwangciswanga, kuba ngale ndlela wonwabile kwaye Le yinto ethanda ikamva elihle lobudlelwane.
Ngakumbi ubuchule kunye nengcinga
Xa usenza izinto kunye neqabane lakho, kubalulekile ukuba uzilungiselele kwaye unike indlela yokucinga kunye nokuyila. Into ebalulekileyo ngaphandle kwamathandabuzo kukukwazi ukuba nexesha elimnandi nomntu omthandayo. Ukuba izicwangciso ziyaphazamiseka, kuya kufuneka uyile kwaye uza nento eyenza ukuba isibini sonwabe ngokupheleleyo.
Uthando kunye neqabane kufuneka likhathalelwe ngokusisigxina. Kwiinkcukacha zempumelelo kwaye kukuba akukho nto inomvuzo komnye umntu ngaphandle kokubamangalisa ngeenkcukacha zazo zonke iintlobo. Esi sibini kufuneka siqonde ngawo onke amaxesha ukuba uthando lukhona njengosuku lokuqala kwaye oku kunefuthe elihle kwikamva elihle lobudlelwane.
Lungiselela ukuthanda izinto kwesi sibini
Kunqabile ukuba esi sibini, bobabini abantu bahambelana ngokuthanda kunye nokuzonwabisa. Kubalulekile ukuba uyazi indlela yokuziqhelanisa nezinto ezinjalo kwaye ke wonwabele elona xesha lininzi kunye. Ukwazi indlela yokuziqhelanisa nokuthanda kwesi sibini sesinye sezitshixo sempumelelo kulwalamano oluthile. Into ebalulekileyo yayo yonke into kukwenza isibini sonwabe kwaye sikwazi ukonwabela umzuzu onje kunye nomntu omthandayo.
Ngamafutshane, njengoko kubalulekile ukuba ube nendawo yakho ngaphakathi kwesi sibini, ukukwazi ukuchitha ixesha lasimahla kunye nomntu omthandayo nako kubalulekile. Akukho zingxengxezo kwaye kubalulekile ukuba ukwazi ukwenza into kunye neqabane lakho kwaye ulisebenzise kakhulu ixesha lakho lasimahla. Kukho ubudlelwane obuninzi obuphela ngokuqhekeka ngenxa yokugqitha kwesiqhelo kunye nokungabikho kwexesha lokuchitha njengesibini. Ukwazi ukwabelana ngamaxesha kunye nangona kungekho xesha, kunceda isibini ukuba sikhule ngakumbi kwaye somelele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Iindlela zokusebenzisa ixesha elingakumbi njengesibini
I-yoga yamanzi kunye nezibonelelo zayo ezintle